Maxay uga kooban tahay SEO? | Martech Zone
Maxay uga kooban tahay SEO?
Helitaanka weyn ee saaxiib wanaagsan Chris Baggott of Isku-darka. In kasta oo aan caqabado badan oo xeeladaha ah in shirkadaha SEO ay u adeegsadaan inay ku kasbadaan darajo, weli waxaa jira kumanaan su'aalo ah oo ku saabsan makiinadaha raadinta maalin kasta oo ay dadku isku dayayaan inay helaan badeecadaada ama adeeggaaga.
Su'aaluhu way kala duwan yihiin...sidaa awgeed dhawr bog oo ka kooban waxyaabo aad u wanaagsan ma gooyn doonaan mar dambe. Run ahaantii shirkad kastaa waxay u baahan tahay inay noqoto madbacad maalmahan haddi ay rajaynayso inay labadooduba dhistaan ​​maamulka warshadahooda oo ay ka faa'idaystaan ​​baadhitaanada kala duwan ee ay dadku samaynayaan.
Maxay uga kooban tahay SEO, wuxuu sahmiyaa sida nuxurku fure ugu yahay aragtida mashiinka raadinta. Waxaad sidoo kale ka akhrisan kartaa wax badan oo ku saabsan Brafton's post blog la xiriira.
Macluumaad ku saabsan Brafton.
Tags: Content Suuqistaraatiijiyada contentecommercekeywordsgadashadaayna search engineSEO
Radar Bulsheedka wuxuu ku dhex jiraa NetSuite's SuiteCloud
Xog wanaagsan, Douglas. Waxaan ku qanacsanahay saadaasha SEO ee hoose garaafka, in kastoo aan u maleynayo inaan ku soo bandhigi doono nuxurka iyo calaamadaha bulshada isla dhulkaas. Maxay kula tahay
Mashiinnada raadinta waa inay bilaabaan inay eegaan oo keliya tayada waxa ku jira, xaafadaha, iyo wixii la mid ah, laakiin sidoo kale waxay u baahan doonaan inay culeys badan saaraan tayada koontada bulshada sidoo kale, sida aan Xaqiiqdii mar horeba waan arkay xisaabaadka qashinka oo loo isticmaalay in lagu dhiirrigeliyo waxyaabaha.
Calaamadaha bulshada miyay runtii ka sii muhiimsan yihiin waxyaabaha laftiisa ka kooban?
Iyadoo aan lahayn nuxur weyn, uma maleynayo inay suurtagal tahay in la yeesho calaamado bulsheed oo xoogan. Oo waxaan u maleynayaa in dadku ay ku dhibtoodeen inay culeyska xisaabtanka bulshada saameyn ku yeeshaan illaa heerkaan. Haddii aadan haysan taageerayaal adag, waxaad had iyo jeer noqoneysaa xisaab qashin. Waxaan ku rajo weynahay in dhibaatadan 'bini'aadamka' ay bedeshay 'xisaabta' dhibaatada SEO… waana wax aan macquul aheyn in lagu soo saaro falcelin 'bini'aadam' barnaamij ahaan xilligan.
Calaamadahaasi waa kuwo si isdaba-joog ah loola dhaqmayo, in kastoo, saw maahan? Waxaan ka maqlay dad badan oo mareegaha / seo folks kuwaas oo, tusaale ahaan, ay bixiyeen Likes / Views on YouTube iyo Facebook, taas oo ugu dambeyntii horseeday jecel / aragti dhab ah.
Marka ugu dambayntii, xisaabaadka qashinka ah waxay keeneen koontooyin dhab ah.
Taasi miyaanay noqon doonin falcelin bini-aadam oo barnaamij ah?
Ma aaminsani inay u sarifanayaan sida dadku u maleeyaan. Waan tagi karaa si aan u iibsado 5,000 oo aragtiyood iyo Youtube ah, laakiin a) kuwa adeegsada YouTube-ka miyey saameyn ku leeyihiin? Malaha maya. b) Ma jiraa buuq ku xeeran dhammaan bogag badan oo la xidhiidha aragtiyadaas? Malaha maya.
Waxaan u maleynayaa inay tahay wax aan macquul aheyn - ama ugu yaraan qiimo jaban - inaad si uun u ciyaari karto nidaamka oo aad u siiso saameyn ku filan oo aad ku soo rogto garaaca.
Jun 4, 2012 saacadu markay ahayd 10:47 AM
Si buuxda ugu raac ogolaanshahaaga. Qiimaha maaddooyinka waaweyn waxaa laga helaa awooddiisa soo jiidashada hoggaamiyeyaasha ra'yiga iyo waxbarista akhristayaasha. Markii waxyaabaha ay la xiriiraan qof, waxay la wadaagi doonaan goobahooda bulsheed saamaynta isku dhufashada ayaa bilaabmaysa.
Sep 20, 2015 at 2: 51 AM
Waan kugu raacsanahay adiga Douglas. Wax is daba marinta (ama barnaamij ahaan) barnaamijyada, aragtiyada, rt-ka iwm ayaa lagu ogaan doonaa matoorada raadinta ee tilmaamaya qaababka "dhabta ah" ee calaamadaha bulshada.
waxaa jira macluumaad aad u qiimo badan halkan
Jul 14, 2012 markay ahayd 4:33 AM
Ma aaminsani inay u sarifanayaan sida dadku u maleeyaan. Waan awoodaa
tag iibso 5,000 oo aragti iyo jecel YouTube, laakiin a) waa kuwa isticmaala YouTube
saameyn leh? Malaha maya. b) Ma jiraa buuq ku xeeran dhammaantiis
goobo badan oo la xidhiidha aragtiyadaas? Malaha maya.